Diyaarado Meydad Iyo Dhaawacyo Ka Qaaday Degmada Jalalaqsi. – Bogga Calamada.com
Diyaarado Meydad Iyo Dhaawacyo Ka Qaaday Degmada Jalalaqsi.
Iyadoo habeenkii xalay dagaal culus uu ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobalka Hiiraan kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo Ciidamada dowlada Ridada Jabuuti waxaa isasoo taraya faahfaahinada laga helayo dagaalkaasi.
Barqo nimadii maanta waxa degmada Jalalaqsi soo caga dhigtay Saddex diyaarad oo kuwa Eelecobtarka ah kuwaasi oo la xaqiijiyay iney halkaasi ka qaadeen meydadka iyo dhaawacyada askar Jabuutiyaan ah kuwaasi oo Baqti iyo dhaawac ku noqday dagaalka xalay ka dhacay degmadaasi.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa xalay si gaar ah u weeraray saddex fariisin oo ciidamada Jabuuti ay ka sameysteen dhanka Galbeed ee degmada Jalalaqsi kuwaasi oo kala ah Buundada degmada’Beerta Xayawaanka oo ah goob qaadka lagu iibin jiray oo hadda saldhig u ah ciidamada Jabuuti iyo saldhig saddexaad oo Jabuutiyaanka ay ka sameysteen waddo hoose oo ka baxday degmada Jalalaqsi oo aada dhanka deegaanka Fiidow.
Dadka degmada Jalalaqsi oo la hadlay warbaahinta qaar ayaa xaqiijiyay in dagaalkii xalay uu ka mid noqonaya dagaaladii ugu cuslaay ee ka dhacay degmadaasi.